« Tokony ho mailo » -
AccueilTresaka« Tokony ho mailo »
« Tokony ho mailo »
14/07/2018 admintriatra Tresaka 0
Tsy azo atao ny manampim-bava eo anatrehan’ny tsy fanarahan-dalàna. Indrindra indrindra moa ka mahakasika ny sarambabem-bahoaka ilay tranga. Ny fiparitahan’ny vokatra vokarin’ny Tiko no voakasik’izany eto. Noho ny fitakiana tetsy amin’ny Parvis Analakely nataon’ireo mpanara-dia ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, dia nosokafan’ireo tompon’andraikitry ny orinasa AAA tany ambadimbadika tany ilay orinasa Tiko teo aloha. Vetivety teo dia heniky ny Yaourt vokarin’izy ireo ny tsena.
Tsy ofisialy anefa ny fisokafan’ilay orinasa fa vokatr’io tolona io fotsiny. Fanina ny rehetra hoe ara-dalàna ve izany ny vokatra atolony ho an’ny mpanjifa ? Misy ilay hoe « certificat de conformité » takian’ny lalàn’ny varotra ve ireny vokatra miparitaka eraka ny tsena tampotampoka ireny?
Toa sarontsaronana tao ambadik’ilay herin’ny fitakiana tetsy amin’ny Parvis Analakely fotsiny mantsy izany rehetra izany. Efa avy amin’ny Tim ankehitriny ny minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana ka inona no manakana azy ireo tsy hanambara amin’ny fomba ofisialy ny fahatomombanan’ireny vokatra tsinjarain’ny orinasan-dRavalomanana ireny? Karazan’ny mihinankinam-poana ihany mantsy amin’izao ny olona. Manjifa fahatany kanefa vokatra tsy nahazo alalana ofisialy avy amin’ny tompon’andraikitra mahefa.
Sanatria ve dia toa ny valalan’alika ilay orinasan-dRavalomanana ka ny tompony aza tsy tia? Efa izy ireo mantsy izao no tompon’ny lakile ao amin’izany sehatry ny Varotra sy ny Fanjifana izany, kanefa dia tsy nisy fihesika kely akory nasehony an’ny mpanjifa nanome toky ny fahazoan’antoka izay vokatra tsinjarainy.
Ny lojika mantsy dia vokatra tsy ara-dalàna izay vokarin’ny orinasa tsy ara-dalàna. Ny fantatry ny rehetra ary nalaza be nanerana an’i Madagasikara dia nakatona noho ny resaka tsy fandoavan-ketra sy tsy fandoavana ny faktioran’ny Jirama io orinasa io, ary ny dikan’izay dia tsy mahazo mamokatra. Vetivety eo anefa, noho ny resaka politika dia ireny fa mivoaka indray ny entana vokariny. Rariny raha hametraka ahiahy ny rehetra, ary tokony hitsangana hiresaka ity tranga ity koa aza ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa.
Efa manana ny politikam-pirenena ho an’ny tanora ny fitondram-panjakana, ary efa andalana ny fametrahana ny paikady izay ho entina amin’izany. Io no politika ankapobeny hitantanana ny tanora amin’ny alalan’ny programan’asa maro ao anatiny, toa ny ...Tohiny